Fitondrana Rajaonarimampianina : Fomba fanaovana politika vaovao -
AccueilRaharaham-pirenenaFitondrana Rajaonarimampianina : Fomba fanaovana politika vaovao
Nataon’ny mpitondra nifandimby zanak’Ikalahafa hatrany ny Faritra na Kaominina iray rehefa mpanao politika na olom-boafidy tsy avy amin’ny antokon’ny mpitondra no lany tao amin’ilay toerana ary izany no mahatonga ireny Kaominina sasany ireny ho taraiky tanteraka eo amin’ny lafiny fampandrosoana sy fotodrafitrasa. Ohatra fotsiny ny ao Bealanana, tsy ahitana afa-tsy lalan-tany sady ratsy kanefa nisy olom-boafidy ben’ny tanàna sy solombavambahoaka nandritra ireo fitondrana nifandimby teto. Nanome toromarika avy hatrany ny hanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanànan’i Bealanana moa ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny diany farany tany.
Naneho tamin’ny vahoaka fomba fanaovana politika vaovao ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina, politika mifototra amin’ny fampandrosoana tsy manavaka firehana na antoko politika. Porofon’izany ny tetikasa “Sosialim-bahoaka” teny amin’iny Faritra Avaradrano ny alakamisy lasa teo. Nifanome tanana ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisitry ny Mponina Onitiana Realy sy ny solombavambahoaka TIM, Randriambolaina Gerry ary ny ben’ny tanàna Avotraina Andriamosa. Fanomezana asa ireo vahoaka miisa 1250 avy amin’ny Fokontany 17, fanadiovana lakandrano mirefy 1,2 km manondraka tanimbary 700 ha. Teo ihany koa ny fanomezana milina fanjairana ho an’ireo renim-pianakaviana mivondrona ao anatin’ireny fikambanana tsy miankina ireny ankoatra ny fanomezana gonin-jezika 15 isa ary ny fanomezana vary, siramamy ary “sure-eau” ho an’ireo zokiolona aman-jatony.
Noporofoin’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’izao hetsika “Sosialim-bahoaka” teny Avaradrano izao fa ny fampandrosoana no laharam-pahamehana ary misokatra amin’ny an-kolafy rehetra mihevitra marina ny tena tombontsoam-bahoaka ny fanjakana. Izay ilay fomba fanaovana politika vaovao nentin’ity fitondrana Hery Rajaonarimampianina ity, fomba fanaovana politika tsy neken’ny sain’ny mpitondra nifandimby.
Tsy ireo be resaka tokoa araka ny nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ny EPP tetsy Andrefanambohijanahary farany teo tokoa no atao hoe tia Tanindrazana. Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga ary izao fomba fanaovana politika vaovao izao mihitsy no nandrasan’ny vahoaka sy nandrandrainy hatramin’izay. Voaporofo izao fa azo atao tsara ny fifanomezan-tanana ho fampandrosoana ny firenena na dia samy hafa aza ny firehana, tsy mba toa ireo zatra ny lalan-dririnina mpanao takalon’aina ny aim-bahoaka mandrava sy manimba izay mba hany mijoro noho ny fitiavan-tseza sy fahefana.